မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက် Myanmar Democracy Congress: ပါတီအခြေခံဥပဒေ
ဒီမိုကရေစီအရေး၊ လွပ်လပ်ရေး ၊ တန်းတူညီမျှရေးနှင့် လူ.အခွင့်အရေးတို.မြန်မာနိုင်ငံတွင်ထွန်း ကားလာမှသာအမှန်တကယ် ခေတ်မီဖွံ.ဖြိုးတိုးတက်သော နိုင်ငံတော်အဖြစ်ရောက်ရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ယုံကြည်သည်.အလျှောက် လူမျိုးမရွေး ၊ ကျား-မ မရွေး ၊ ဘာသာမရွေး ၊ အသက်ကြီးငယ်မရွေး ၊ နေထိုင် ရာဒေသမရွေး ၊ ဆင်းရဲချမ်းသာမရွေး မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းသည် မိမိတို.ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ဒီမိုက ရေစီနည်းကျကျရွေးချယ်ထားသည်.အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုဖွဲ.စည်းတည်ထောင်၍ မိမိတို.၏မွေးရာပါ လူ.အခွင့်အရေးတို.ကိုအပြည်.အ၀ခံစားရရှိစေနိုင်ခြင်းအကျိုးငှာ ပြည်သူလူထုနှင့်တသားတည်းလက်တွဲ ဆောင်ရွက်မည်.နိုင်ငံရေးအဖွဲ.အစည်းတစ်ရပ်အဖြစ် “ မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက်"ကိုဖွဲ.စည်းတည် ထောင်လိုက်သည်။
ပါတီ၏အမည်မှာ " မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက် " ဖြစ်သည် ။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာအားဖြင့် ( Myanmar Democracy Congress ) ဟုခေါ်တွင်စေရမည် ။ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုတည် ဆောက်ရာတွင် ဒီမိုကရေစီနည်းအားဖြင့်သာ သင့်တော်မှန်ကန်ကြောင်း ၊ ထို.အတွက် မိမိတို. မြန်မာနိုင်ငံ သားအားလုံးက စုရုံးတည်ဆောက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွံ.ဖြိုးတိုးတက်ရေး သည်လည်း မိမိတို.နိုင်ငံသားအားလုံး၌ တာဝန်ရှိကြောင်းဖေါ်ပြသည် ။
အနီရောင်အောက်ခံ၏ အလယ်တွင် ရွှေရောင်တောက်ပသော အရွယ်တူကြယ်သုံးလုံးကို ညီညာ စွာတန်းစီ လျှက်ရေးဆွဲထားသည်။ အနီရောင်အောက်ခံသည် ရဲရင့်တက်ကြွသောမြန်မာနိုင်ငံကိုရည်ညွှန်း သည်။ ရွှေရောင်တောက်ပသောကြယ် သုံးလုံးသည် တရားမျှတမှု၊ လွတ်လပ်မှု နှင့် တန်းတူညီမျှမှုတို.ကို ရည်ညွှန်းသည်။
(က) ဒီမိုကရေစီအရေး ၊ လွတ်လပ်ရေး ၊ တန်းတူညီမျှရေး နှင့် လူ.အခွင့်အရေးတို.ကို မြန်မာနိုင်ငံ
(ခ) မြန်မာနိုင်ငံရှိတိုင်းရင်းသားအားလုံး နိုင်ငံဖွံ.ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကဏ္ဍ အသီးသီးတွင်ပါဝင်လာ
(ဂ) ဒီမိုကရေစီ အရေးကိုယုံကြည်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သောပါတီဝင် အသစ်များ တိုးပွားလာစေ
(ဃ) မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက် ၏ ပါတီအဆင့်အားလုံးတွင် တိုင်းရင်းသားများ၊အမျိုသမီးများ
(င) မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း မှီတင်းနေထိုင်သူ လူမျိုးစုအချင်းချင်း လေးစားမှု၊ ယုံကြည်မှုနှင့် ပူး
မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ကရက် ၏ ပါတီဌာနချုပ်တည်နေရာသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အချက်အချာ ကျသော ရန်ကုန်မြို၍သာ တည်ရှိရမည်။
မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက် ၏ စည်းရုံးရေးနယ်နမိတ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထ၀ီဝင် အနေအ ထားအရသတ်မှတ်ထားသော နယ်နမိတ်အတိုင်းဖြစ်သည်။
(က) အစိုးရ၀န်ထမ်း၊ သာသနာ.၀န်ထမ်း၊ ရူးသွပ်သူများမှအပ အသက် (၁၈) နှစ်ပြည်.ပြီးသူပြည်
(ခ) ပါတီဝင်လျှောက်ထားသူသည် မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ကရက်၏ အခြေခံစည်းမျဉ်း၊ မူဝါဒနှင့်
(ဂ) အခြားသော မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဖွဲ.စည်းထားသည်.ပါတီဝင်မဟုတ်သူဖြစ်ရမည်။
(၆-၂) ပါတီဝင်မိတ်ဆွေများအဖြစ် အောက်ပါအချက်များနှင့်ပြည်.စုံသူများကို လက်ခံရန်သတ်မှတ် သည်။
(က) မြန်မာနိုင်ငံအရေးအခင်းများတွင်စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိပြီး၊ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက်၏လုပ်ငန်း
(ခ) မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက်၏ လုပ်ငန်းများတွင် အကြံဥာဏ်အားဖြင့်လည်းကောင်း၊ ငွေကြေး
အားဖြင့်လည်းကောင်း၊ ရံဖါရံခါ စာတမ်းများရေးခြင်း၊ အကြံပြုချက်များပေးခြင်းဖြင့်လည်း
(၆-၃) မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက် ၏ပါတီဝင်အဖြစ်လျှောက်ထားလိုသူသည် အောက်တွင်ဖေါ်ပြပါ
အောက်တွင်ဖေါ်ပြပါအချက်များနှင့်အတူ မိမိနေထိုင်ရာ မြို.နယ်ဒေသရှိ မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်
(က) မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက် ၏သတ်မှတ်ထားသည်.လျှောက်လွှာပုံစံကိုဖြည်.သွင်းခြင်း။
(ခ) မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက် ၏လက်ရှိပါတီဝင်တစ်ဦး၏ ထောက်ခံချက်ကိုရယူခြင်း။
(ဂ) ပါတီဝင်များ၏ သစ္စာအဓိဌာန်ကို ဖတ်ရှုလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း။
(၆-၄) မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက်အဖွဲ.၀င်များ၏ သစ္စာအဓိဌာန်
(၁) ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့် တိုင်းရင်းသားလုပ်သားပြည်သူများအပေါ်သစ္စာရှိပါ မည်။
(၂) မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက် ၏ပါတီဝင်များအချင်းချင်းသစ္စာရှိပါမည်။
(၃) မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက်၏ ဖွဲ.စည်းပုံအခြေခံဥပဒေစည်းမျဉ်းများကို လေးစားလိုက် နာပါမည်။
(၄) မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက် ၏တာဝန်များကိုကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်ပါမည်။
(၅) ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်း မှီတင်းနေထိုင်ကြသူများ၏ အကျိုးစီးပွားကို အ စဉ်အမြဲ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါမည်။
မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက် ၏ပါတီဝင်များအတွက် အောက်ပါစည်းကမ်းချက်များကိုပြ ဌာန်းပါတည်။
(က) မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက်၏ ပါတီဝင်များသည် ဤပါတီ၏ ဖွဲ.စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်း ဥပဒေတွင်ဖေါ်ပြထားသည်. ရည်ရွယ်ချက်၊မူဝါဒလမ်းစဉ်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်စည်းကမ်းများကိုလိုက်နာရမည်။
(ခ) ၀ါဒစွဲ၊ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ၊ လူမျိုးစွဲကင်းရမည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုများကိုရှောင်ကျဉ်ရမည်။
(ဂ) မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက် ကသတ်မှတ်ပြဌာန်းထားသည်.ပါတီကြေးကိုပေးဆောင်ရ မည်။
(ဃ) အကျင့်စာရိတ္တပျက်ပြားမှုများ၊ ကိုယ်ကျိုးရှာမှုများနှင့် တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်မှုများကို ရှောင်ကျဉ်ရမည်။
(င) ပါတီဝင်များလိုက်နာရမည်. အချက်များကို ပါတီညီလာခံနှင့် ပါတီအလုပ်အမှုဆောင်အ ဖွဲ.မှလိုအပ်သလိုသတ်မှတ်မည်။
မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ရက် ၏ဖွဲ.စည်းပုံအဆင့်ဆင့်ကို အောက်ပါအတိုင်းသတ်မှတ်သည်။
(က) အခြေခံပါတီ ( ကျေးရွာ သို.မဟုတ် ရပ်ကွက် )။
ကျေးရွာခြေခံပါတီ၊ ရပ်ကွက်ပါတီ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ.ကို အောက်ပါအတိုင်းဖွဲ.စည်းနိုင် သည်။
၅။ ဘဏ္ဍာရေးမှုး နှင့်
၆။ အမှုဆောင် (၆)ဦး
မြို.နယ်ပါတီ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ.ကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ.စည်းနိုင်သည်။
၆။ အမှုဆောင် (၈)ဦး
၁၁။ တိုင်း သို.မဟုတ် ပြည်နယ်ပါတီ
တိုင်း သို.မဟုတ် ပြည်နယ်ပါတီ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ.ကိုအောက်ပါအတိုင်းဖွဲ.စည်းနိုင်သည်။
၆။ အမှုဆောင် (၁၀)ဦး
ပါတီဌာနချုပ် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ.ကို အောက်ပါအတိုင်းဖွဲ.စည်းနိုင်သည်။
၄။ တွဲဘက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှုး (၁)
၅။ တွဲဘက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှုး (၂)
၆။ ဘဏ္ဍာရေးမှုး နှင့်
၇။ အမှုဆောင် (၁၁) ဦး
(က) အခြေခံပါတီတွင် ပါတီဝင် (၅) ဦးမှ (၁၅၀) ဦးထိရှိလျှင် မြို.နယ်ညီလာခံသို. ညီလာခံ ကိုယ်
စားလှယ်(၅)ဦး၊ အကယ်၍ (၁၅၀) ထက်ပိုလျှင် အပို (၅၀) ပြည့်တိုင်း နောက်ထပ်ညီလာခံ
(ခ) မြို.နယ်ပါတီတွင် ပါတီဝင် (၅၀၀) မှ ( ၁၀၀၀) အထိရှိလျှင် တိုင်း သို.မဟုတ် ပြည်နယ်ညီ
လာခံသို. ကိုယ်စားလှယ်(၁၀) ဦး၊ အကယ်၍ (၁၀၀၀) ထက်ပိုလျှင် အပို (၅၀၀)တိုးတိုင်း
ကိုယ်စားလှယ် (၁) ဦးကျ ထပ်မံရွေးခွင့်ရှိသည်။
(ဂ) တိုင်း သို.မဟုတ် ပြည်နယ်ပါတီတွင် ပါတီဝင် (၅၀၀) မှ ( ၁၀၀၀ ) အထိရှိလျှင် နိုင်ငံလုံး
ဆိုင်ရာညီလာခံသို. ကိုယ်စာလှယ်(၅) ဦး၊ အကယ်၍ (၁၀၀၀ ) ထက်ပိုလျှင် အပို (၁၀၀၀)
အတွက် ကိုယ်စားလှယ် (၅) ဦးကျ ထပ်မံရွေးခွင့်ရှိသည်။
၁၄။ ဒီမိုကရေစီစနစ်အရ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း
မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက် ၏ အဆင့်အဆင့် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ.ကို ဒီမိုကရေစီစနစ် အရရွေးကောက်တင်မြှောက်ရမည်။ အနည်းစုက အများစုကိုနာခံရမည်။ ပါတီဝင်တစ်ဦးခြင်းသည်လည်း ကောင်းပါတီတစ်ရပ်လုံးသည်လည်းကောင်း ဗဟိုကော်မတီကို နာခ့ရမည်။ ညီလာခံများတွင် ကိုယ်စား လှယ်များနှင့် အလုပ်အမှုဆောင်များသာမဲပေးနိုင်သည်။
(ခ) နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာပါတီညီလာခံအား (၄) နှစ်တွင် တစ်ကြိမ်ခေါ်ယူကျင်းပရမည်။
(ဂ) နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာပါတီညီလာခံကို ဗဟိုကော်မတီက ခေါ်ယူရမည်။
(က) ဗဟိုကော်မတီသည် ညီလာခံတစ်ခုနှင့် တစ်ခုအကြားအမြင့်ဆုံးအာဏာပိုင်အဖွဲ.ဖြစ်သည်။
(ခ) ဗဟိုကော်မတီအာ ပါတီညီလာခံမှ ရွေးကောက်တင်မြှောက်လိုက်သောပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့်ဖွဲ.စည် ရမည်။
(ဂ) ပါတီဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီကို ဗဟိုကော်မတီဝင်များထဲမှ ရွေးချယ်ဖွဲ.စည်းရမည်။
(ဃ) ဗဟိုကော်မတီသည် ပါတီညီလာခံမှချမှတ်ထားသော လမ်းစဉ်၊ လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ဆုံးဖြတ်
(င) ပါတီဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးကို (၆) လတစ်ကြိမ်ခေါ်ယူရမည်။
(စ) ပါတီ၏မူဝါဒများ၊ နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ နည်းဥပဒေနှင့် စည်းမျဉ်းစည်း
ကမ်းများကို ရေးဆွဲရန်၊ ပြင်ဆင်ဖြည်.စွက်ရန်လိုအပ်ပါက ဗဟိုကော်မတီမျက်နှာစုံညီအစည်း
အဝေးကရေးဆွဲပြင်ဆင် ဖြည်.စွက်နိုင်သည်။ ယင်းရေးဆွဲချက၊် ပြင်ဆင်ဖြည်.စွက်ချက်များ
(က) နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာပါတီညီလာခံမှ ရွေးကောက်တင်မြောက်လိုက်သော ဗဟိုကော်မတီဝင်များ
(ခ) ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီသည် ဗဟိုကော်မတီ အစည်းအဝေးကအပ်နှင်းသောအ
(ဂ) ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီအစည်းအဝေကို (၃)လတစ်ကြိမ် ပုံမှန်ကျင်းပရမည်။
(က) ဥက္ကဌသည် ပါတီ၏အမြင့်ဆုံးနှင့်တာဝန်အရှိဆုံးခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်။
(ခ) ဗဟိုကော်မတီနှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းများအား တာဝန်ယူဦးစီးကွပ် ကဲရမည်။
(ဂ) ပါတီဖွဲ.စည်းပုံစည်းမျဉ်း၊ နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား ထိန်းသိမ်းပေးရမည်။
(ဃ) ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးနှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အစည်းအဝေးတို.တွင် သဘာပတိ အဖြစ်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည်။
(က) ဒု-ဥက္ကဌသည် ပါတီ၏ ဒုတိယအမြင့်ဆုံးနှင့် ဒုတိယတာဝန်အရှိဆုံးခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်။
(ခ) အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဥက္ကဌသည် လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုမထမ်းဆောင်နိုင်သည်.ကာ
လများတွင် ဒု-ဥက္ကဌ သည်ဥက္ကဌ၏တာဝန်များကိုတမ်းဆောင်ရမည်။
(ဂ) ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ၏ နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ဘဏ္ဍာရေးသုံးစွဲမှုကို ဒု-ဥက္ကဌ
(ဃ) ဥက္ကဌ နှင့်ခွဲဝေသတ်မှတ်ထားသော ဗဟိုလုပ်ငန်းကော်မတီများကို တာဝန်ယူခေါင်းဆောင် ရမည်။
(က) အထွေထွေအတွင်းရေးမှုးသည် ပါတီတစ်ရပ်လုံး၏လုပ်ငန်းများ ပုံမှန်လည်ပတ်နေရေးအ
(ခ) အထွေထွေအတွင်းရေးမှုးသည် ဗဟိုကော်မတီနှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီတို.၏
(ဂ) ဥက္ကဌ၏ ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် အထွေထွေအတွင်းရေးမှုးသည် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အစည်း
(ဃ) ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးနှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆော်ကော်မတီအစည်းအဝေးတို.တွင်အ
၂၁။ တွဲဘက် အထွေထွေအတွင်းရေးမှုးများ
(က) တွဲဘက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှုးများသည် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်အထွေထွေအ
(ခ) အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အထွေထွေအတွင်းရေးမှုးသည် လုပ်ငန်းတာဝန်များ မထမ်း
(က) ဗဟိုကော်မတီသည် ပါတီ၏လုပ်ငန်းများ ချောမွေ.စွာလည်ပတ်နိုင်ရေးအတွက် ဗဟိုလုပ်
ငန်းကော်မတီများကိုလိုအပ်သလိုဖွဲ.စည်းရမည်။ လုပ်ငန်းကော်မတီတစ်ခုခြင်းစီကို ဗဟို
(ခ) ဗဟိုကော်မတီသည် လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ ဗဟိုလုပ်ငန်းကော်မတီများအတွက်ပါတီ
၂၃။ မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက်၏ အလံတော်အောက်တွင် အမျိုးသမီးအဖွဲ.ကိုလည်း ပါတီအ ဆင့်ဆင့်တွင် ကျေးရွာ/ ရပ်ကွက်၊ မြို.နယ်၊ တိုင်း / ပြည်နယ်၊ ဗဟိုဌာနချုပ်အလုပ်အမှုဆောင်များကို ဖွဲ. စည်းသကဲ.သိုအလားတူဖွဲ.စည်းရမည်။
၂၄။ မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက်၏ အလံတော်အောက်တွင် လူငယ်အဖွဲ.ကိုလည်း ပါတီအ ဆင့်ဆင့်တွင် ကျေးရွာ/ ရပ်ကွက်၊ မြို.နယ်၊ တိုင်း / ပြည်နယ်၊ ဗဟိုဌာနချုပ်အလုပ်အမှုဆောင်များကို ဖွဲ. စည်းသကဲ.သိုအလားတူဖွဲ.စည်းရမည်။
၂၅။ ပါတီ၊ အမျိုးသမီးနှင့် လူငယ်အဖွဲ.များတွင် အထက်အောက်ဆက်စပ်မှုနှင့် ပါတီ၊ အမျိုးသ မီးနှင့်လူငယ်အဖွဲ.များဆက်စပ်မှုရှိစေရန်အမှုဆောင်အဖွဲ.ကိုအောက်ပါအတိုင်းဖွဲ.စည်ရမည်။
(က) ပါတီဌာနချုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ.( Central Executive Committee ) + တိုင်း / ပြည်နယ်ပါတီ
ဥက္ကဌများ + အမျိုးသမီးဌာနချုပ် ဥက္ကဌ + လူငယ်ဌာနချုပ်ဥက္ကဌ။
(ခ) တိုင်း / ပြည်နယ် အမှုဆောင်အဖွဲ.
တိုင်း / ပြည်နယ်ပါတီအမှုဆောင်အဖွဲ.တွင် တိုင်း / ပြည်နယ် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ. +
အမျိုးသမီးတိုင်း / ပြည်နယ်ဥက္ကဌ + မြိုနယ်ပါတီ ဥက္ကဌများ + လူငယ်တိုင်း / ပြည်နယ် ဥက္က ဌ။
မြိုနယ်ပါတီအမှုဆောင်အဖွဲ.တွင် မြိုနယ်ပါတီအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ. + ကျေးရွာ / ရပ်ကွက် ပါ
တီဥက္ကဌများ + အမျိုးသမီး မြိုနယ်ဥက္ကဌ + လူငယ်မြိုနယ်ဥက္ကဌ။
(ဃ) ကျေးရွာ / ရပ်ကွက် ပါတီ အမှုဆောင်အဖွဲ.။
ကျေးရွာ / ရပ်ကွက်အမှုဆောင်အဖွဲ.တွင် ကျေးရွာ / ရပ်ကွက် ပါတီအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ. +
အမျိုးသမီး ကျေးရွာ / ရပ်ကွက် ဥက္က + လူငယ် ကျေးရွာ / ရပ်ကွက်ဥက္ကဌ။
(က) အမျိုးသမီးဌာနချုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ.တွင် အမျိုးသမီးဌာနချုပ် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ. +
အမျိုးသမီး တိုင်း / ပြည်နယ် ဥက္ကဌများ။
(ခ) အမျိုးသမီး တိုင်း / ပြည်နယ် အမှုဆောင် အဖွဲ တွင် အမျိုးသမီး တိုင်း / ပြည်နယ်အလုပ်အမှု
ဆောင်အဖွဲ. + အမျိုးသမီး မြိုနယ်ဥက္ကဌများ။
(ဂ) အမျိုးသမီး မြို.နယ် အမှုဆောင်အဖွဲ.တွင် အမျိုးသမီ မြိုနယ်အမှုဆောင် အလုပ်အမှုဆောင်အ
ဖွဲ. + အမျိုးသမီးကျေးရွာ / ရပ်ကွက်ဥက္ကဌများ။
(က) လူငယ်ဌာနချုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ.တွင် လူငယ်ဌာနချုပ် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ. + တိုင်း / ပြည်
(ခ) လူငယ်တိုင်း / ပြည်နယ် အမှုဆောင်အဖွဲ.တွင် လူငယ် တိုင်း / ပြည်နယ် အလုပ်အမှုဆောင် +
(ဂ) လူငယ်မြို.နယ်အမှုဆောင်အဖွဲ.တွင် လူငယ်မြိုနယ် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ. +ကျေးရွာ / ရပ်
(က) ပါတီဝင်တိုင်းသည် ပါတီ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဥပဒေ၊နည်းဥပဒေများကိုလိုက်နာရန်ပျက်
ကွက်ပါက သတိပေးခြင်း၊ ပါတီတာဝန်မှရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပါတီဝင်အဖြစ်မှထုပ်ပယ်ခြင်းအထိ
(ခ) ပါတီဝင်များသည် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းချိုးဖေါက်ခြင်းကို သင့်တော်သည်.အဖွဲ.၀င်ဦးရေအား
(ဂ) အရေးယူအပြစ်ပေးခံရသူသည် ပါတီဗဟိုကော်မတီထံ အယူခံတင်သွင်းနိုင်သည်။
(က) မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက်ကိုစတင်တည်ထောင်သူများအား ပါတီကိုတည်ထောင်မွေးဖွားသူ
များအဖြစ် စာအားဖြင့်ရေးသားသတ်မှတ်ကာ အစဉ်အလေးအမြတ်ပြုရမည်။
(ခ) မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက်မှ နုပ်ထွက်လိုသူများသည် ပါတီဗဟိုကော်မတီ၏ အလျှဉ်းသင်းသ
လိုစီမံပေးသည်.ရုံးစနစ်အရ အကြောင်းကြားနိုင်ပြီး မည်သည့်အကြောင်းအားဖြင့်နှုပ်ထွက်
သည်ဖြစ်စေ၄င်းနှုတ်ထွက်သူအား ပါတီတွင်လက်တွဲဆောင်ရွက်ခဲ့သမျှအတွက်လေးစား အသိ
အခန်း (၁၂ )
(က) ပါတီ၏ ဖွဲ.စည်းပုံအခြေခံဥပဒေစည်းမျဉ်းကို ပြင်ဆင်ဖြည်.စွက်၊ ပြောင်းလဲ၊ အသစ်အစားထိုး
(ခ) နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာပါတီညီလာခံသို.တက်ရောက်သည်.ကိုယ်စားလှယ် (၇၅) ရာခိုင်နှုန်း၏သ
ဘောတူညီချက်ရမှသာ ဖွဲ.စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်းဥပဒေ ပြင်ဆင်ဖြည်.စွက်၊ ပြောင်းလဲ၊ အ